Ku Wareeji Wadahadalka - Milyan sameeyeyaasha
Annaga Million Merseyaasha ah waxaan marka hore diiradda saareynaa inaan ganacsiga ka dhigno mid guuleysta, iyo sidoo kale, qorsheynta biyo gelinta iyo deyn la habeynta dib u habeynta. Waxaan wada ognahay iibyo badan, heshiisyo waa weyn iyo macaamiil badan ayaa ah aaladaha ugufiican ee lagu xaliyo dhibaatooyinka dhaqaale iyo ku soo celinta meheradda ganacsiga wareega caafimaad qabka ah. Waxaan diirada saareynaa in la ilaaliyo sinaanta milkiilaha waxaanan sidoo kale isku daynaa inaan ka qeyb galno kooxda hogaaminta sare, shaqaalaha safka hore iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga wareega wareega.
Shirkaduhu waxay la kulmaan caqabado aad u daran, waxay shaqaaleysiiyaan khabiirkeenna ku soo qulqulaya si ay uga caawiyaan iyaga inay ku soo noqdaan wadada.
Waxaan ka caawineynaa shirkadaha annaga oo bixinna wadatashi ku saleysan mashruuc muddada gaaban ah iyo sidoo kale qaab ku dhisan istaraatiijiyad waqti-amaah ah. Mid ka mid ah faa iidooyinka ugu weyn ee shaqaalaysiinta kooxdeena xirfadda leh waa in la keeno himilo. Ujeeddo iyadoo la bixinayo dulmar guud iyo talooyin lana soo bandhigo habraacyo dan u ah shirkadda.
Haddii shirkaddu ku dhufatay meel ku-meel-gaadh ah oo aan caadi ahayn sababtuna tahay duruufaha khaaska ah, sida hoos u dhac dhaqaale oo ballaadhan ama hoos u dhac warshadeed, ayaa ku heli kara inuu shaqaaleeyo khabiirkeenna khibradda u leh wareegga. Tani waa mid aad uga yar jahwareer iyo qas khalkhal galinta marka la keeno khabiir ku takhasusay wareejinta. Si kastaba ha noqotee, haddii ay arrimuhu qoto dheer yihiin, sida musalifin ama ku guul darreysiga ama wareejinta lahaanshaha, ka dibna sida caadiga ah, waa habka kaliya ee lagu badbaadiyo shirkadda.
Caadi ahaan waxaan si wada jir ah u go'aamineynaa qodobbada aan soo sheegnay bilowga ka dib markaan falanqeyn buuxda ku sameeyno xaaladda:
La tashiga ka qeybqaadashadu badanaa wuxuu shaqeeyaa dhowr asbuuc ama bilo ama sannado iyadoo kuxiran xaaladda iyo qalalaasaha laakiin bilaabidda iyo joojinta muddada ayaa la go'aamiyay si hawlgalka iyo kharashaadka ay u socdaan.
Qaab-dhismeedka lacagta ayaa had iyo jeer la go'aamiyaa bilowga si loo hubiyo in labada dhinac ee ku lugta leh ay yihiin kuwa raaxo leh, waxay noqon kartaa mid ku saleysan waxqabadka, guri kaqeybgal ama heerka khidmadda saacaddii iyadoo ku xiran raaxada labada dhinac.
Hadaf cad oo la qiyaasi karo ayaa la dejiyey ka hor inta aan kooxda takhasuska leh ay shaqo bilaabin si qof walbaa uu u yaallo bogga isku midka ah ee ku saabsan waxa ka dhigaya ka qeybgal aan fiicneyn.
Kooxdayada Khabiirka ujawaabidda waxay sameyaan qiimeyn sare ee ugu hooseysa ee ganacsiga si loo go'aamiyo rajada ay ka qabaan soo nooleynta iyo faa'iidada mustaqbalka. Haddii ay suurogal tahay dib-u-nooleyn, ka dib annaga uun ayaan la wareegeynaa howsha, ka dib markii aan sameynay falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan dhaqaalaha shirkadda iyo kalfadhiyo qoto dheer iyo maskax furis ah oo lala yeesho dad muhiim ah oo soo waday bandhigga, oo ay ka mid yihiin, fuliyayaal, maamuleyaal iyo maamuleyaal. xubnaha guddiga, iwm.
Taas ka dib, waxaan u muuqanaa inaan diyaarinno qorshe ficil kaas oo liis gareynaya talooyinkayaga iyo waxyaabaha muhiimka ah ee lagu gaarayo bartilmaameedka waxqabadka, waxaa intaa dheer wuxuu u adeegaa sidii khariidad waddo loogu talagalay soosaarka wanaagsan iyo faa'iidada leh.